Xildhibaan Xaraf oo ka hadlay cod sir ah oo laga faafiyay gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland – Kalfadhi
Xildhibaan Xaraf oo ka hadlay cod sir ah oo laga faafiyay gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland
March 17, 2019 March 17, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Xildhibaan Maxamed Cabdi Xaraf ka tirsan golaha wakiillada Puntland ayaa ka hadlay cod uu duubay gudoomiyaha golaha wakiilladu, mar uu toddobaadkii hore la hadlayay gole Online ah oo ay si gaar ah ugu kulanto beeshiisu, kaas oo uu kaga waramay arrimo siyaasadeed oo dowladda cusub khuseeya iyo xiisadda gobolka Sanaag.
Gudoomiye Cabdixakiin Dhoobo-daareed ayaa codkaas oo markii dambe si xoog leh loogu baahiyay boggaga bulshada wuxuu ku sheegay in ay jirto mucaaradad ay dowladdu ka wajahayso qaar ka mid ah beelaha magaalada Qardho, taas oo uu muujiyay in ay tahay caqabad weyn oo ay wajahayso xukuumadda cusub.
Magaalada Qardho ayaa ah deegaanka uu ka soo jeedo madaxweynaha dhowaan la doortay ee Puntland Siciid Cabdullahi Deni.
Xildhibaan Xaraf ayaa gudoomiyaha ka codsaday inuu raaligelin ka bixiyo arrintaas oo uu ku tilmaamay in ay tahay kicin. Wuxuu xusay in uusan jirin wax sharci ah oo gudoomiyaha awood u siinaya xataa hadii uu cid gaar ah la hadlo inuu muujiyo kala qaybin.
“Gobol mucaarad ah waxaa loo yaqaan, hadee gobol fowdo ah oo aan Puntland ka tirsanayn oo aan masuuliyadeedu ka shaqaynayn oo aan qof masuul ah tegi karin, laakiin sidaas maaha” Ayuu yiri Xildhibaan Xaraf
Xildhibaankan oo la hadlay warbaahinta maxaliga ah ayaa ku gudooyay inuu golaha wakiillada hor geyn doono arrintan hadii uusan gudoomiyuhu raaligelin ka bixin, si goluhu raaligelinta ay mudan yihiin u siiyo dadka gobolka Karkaar.
Gudoomiye Cabdixakiin Dhoobo-daareed ayaa isagoo ku sugan Muqdisho wuxuu ka hadlay codka sirta ah ee baraha bulshada qabsaday, wuxuuna ku sheegay inuu ahaa arrin gaar ah oo aan saxaafadda loogu talagelin. Isagoo cambaareeyay ciddii ka dambaysay in ay bannaanka keento oo uu ku tilmaamay cadow iyo xaasid dano kale leh.
Gudoomiye Cabdixakiin Dhoobo-daareed si gaar ah ugama uusan jawaabin arrimaha xasaasiga ah ee codkaas ku jiray.
Xildhibaan ku tilmaamay go’aankii Xukuumadda Galmudug ee shalay sharci darro